Abaqhubi be-NVIDIA 455.23.04 bakhutshiwe kwaye beza nenkxaso ye-RTX 3080 | Ubunlog
Kwiintsuku ezininzi ezidlulileyo I-NVIDIA ibhengeze ukukhutshwa kwabaqhubi bayo I-NVIDIA 455.23.04 eyayizizo ikhutshwe ukuze isombulule ezinye iingxaki, kodwa ngaphezulu kwako konke ukongeza ukungqinelana noluhlu lwayo olutsha lwekhadi levidiyo, i-RTX 3000.
Kwinkxaso entsha eyongezwe kumlawuli, iGeForce RTX 3080/3090 kunye neGeForce MX450 GPUs ime ngaphandle, ukongeza ekuphuculeni ukusetyenziswa, ukumisela amandla kunye nokunye.
1 Iimpawu ezintsha eziphambili zeNvidia 455.23.04
2 Uyifaka njani i-NVIDIA driver kwi-Ubuntu nakwiziphumo?
Iimpawu ezintsha eziphambili zeNvidia 455.23.04
Njengoko bekutshiwo ekuqaleni, enye yeenoveli eziphambili zolu hlobo lutsha lwabaqhubi Inkxaso yeGeForce RTX 3080/3090 GPU (esele ifumaneka kule veki) kunye neGeForce MX450. Njengedatha eyongezelelweyo, ndingathanda ukukhankanya ukuba i-RTX 3090 yi-20% egqithile kwi-3080.
Kwelinye icala, okanyeOlunye utshintsho oludibeneyo kolu hlobo lutsha ikhoyo ubume benkxaso yokuchaza inkumbulo yeVkMemoryType, ephucule intsebenzo kwi-DiRT Rally 2.0, INTSHAYELELO: Ongunaphakade, kunye neHlabathi leMfazwe.
ngaphandle koko Itekhnoloji ye-NGX kunye nezinto zoncedo zongezwa ngokuhlaziya-Iseti yezicelo ze-x86-64 ezibonelela ngokufikelela kubukrelekrele bokufakelwa (AI).
Ngokumalunga nokuqokelelwa kwe-bug, kuyakhankanywa kwisibhengezo sokuba Ukulungisa i-bug ebangele ukusetyenziswa okuphezulu kwe-CPU kwiiapps ezenza inani elikhulu lezinto zeVkFence, ezazibonakala ngokukodwa kwiRed Dead Redemption 2 game.
Kwaye kwagqitywa ibug enokubangela usetyenziso olusebenzisa iWebKit ukuba lonakalise inkqubo esezantsi yemizobo yeWayland.
Kususwe inkxaso ye-SLI yeendlela "SFR", "AFR" kunye ne "AA". I-SLI Mosaic, i-Base Mosaic, i-GL_NV_gpu_multicast, kunye ne-GLX_NV_multigpu_context isaxhaswa.
De Olunye utshintsho olubonakalayo kule nguqulo intsha Abaqhubi beNvidia 455.23.04:
Imowudi yethayile yesiseko yandisiwe ukusuka kwizikrini ezintathu ukuya kwezintlanu.
Ukongezwa kweVP9 yezixhobo zokumisa izixhobo ngokusebenzisa iVDAU-Inkxaso eyongeziweyo yemijelo enobunzulu bombala obu-10 kunye no-12
Ukulungiswa kwe-regression ebangele ukuba useto lwe-DPMS lungahoywa, kuthintela isikrini ekucimeni.
Ukulungiswa kwe-bugs xa usebenza ne-PRIME.
Ukuphuculwa koseto lwe-nvidia.
Inkxaso yeVulkan API yandisiwe yenguqulo 1.2.142.
Okokugqibela, ukuba ufuna ukwazi ngakumbi malunga nokukhutshwa kwale nguqulo intsha yabaqhubi, unako jonga eli khonkco lilandelayo.
Uyifaka njani i-NVIDIA driver kwi-Ubuntu nakwiziphumo?
Ukufakela lo mqhubi siza kuhamba kule khonkco ilandelayo apho siza kuyikhuphela khona.
Qaphela: ngaphambi kokwenza nayiphi na inkqubo kubalulekile ukuba ujonge ukungqinelana nalo mqhubi mtsha kunye noqwalaselo lwezixhobo zakho (inkqubo, i-kernel, i-linux-headers, i-Xorg version).
Kuba ukuba akunjalo, ungagqibela ngescreen esimnyama kwaye akukho xesha sinoxanduva lwayo kuba sisigqibo sakho sokwenza okanye hayi.
Khuphella ngoku masiqhubeke nokwenza uluhlu lwabamnyama ukunqanda ukungqubana kunye nabaqhubi basimahla:
Kwaye kuyo siza kongeza oku kulandelayo.
Uyenzile le nto ngoku siza kuqala inkqubo yethu ukuze uluhlu lwabamnyama luqale ukusebenza.
Nje ukuba inkqubo iqalisiwe, ngoku siza kumisa umzobo wegraphical server (graphical interface) nge:
Kwimeko apho unescreen esimnyama xa uqala okanye ukuba umise i-graphical server, ngoku siza kungena kwi-TTY ngokuchwetheza loqwalaselo lweqhosha elilandelayo "Ctrl + Alt + F1".
Ukuba sele unenguqulo yangaphambili, Kuyacetyiswa ukuba wenze okungafakwanga ukuthintela ukungqubana okunokubakho:
Kufuneka siphumeze lo myalelo ulandelayo:
Kwaye ngoku lixesha lokwenza ufakelo, kuba oku siza kunika imvume yokuphumeza ngo:
Kwaye senza nge:
Ekupheleni kofakelo kuya kufuneka uqale kabusha ikhompyuter yakho ukuze lonke utshintsho lomthwalo kuqaliso.
Umendo opheleleyo kwinqaku: ubunlog » Ubuntu » Abaqhubi be-NVIDIA 455.23.04 bakhutshiwe kwaye bafika benenkxaso ye-RTX 3080
IGeary 3.38 ifika nenkxaso yokongezwa kunye nokuphuculwa kokuhambelana